Ukwahluka kwenkcubeko eCanada | Ukuhamba kwe-Absolut
daniel | 29/06/2021 11:08 | Ukuhlaziywa ukuba 29/06/2021 12:08 | Khanada
La iyantlukwano kwinkcubeko eCanada Le yenye yeempawu ezibalaseleyo ezahlukileyo kuluntu lweli lizwe. Hayi lilize ekupheleni kweminyaka elishumi yama-70 olu hlanga luthathe iflegi ye iinkcubeko ezininzi, Ukuba lelinye lawona mazwe anyuse kakhulu i- ukufudukela kwelinye ilizwe.
Oku kwahluka sisiphumo sezithethe ezahlukeneyo zonqulo kunye neempembelelo zenkcubeko, njengelizwe labaphambukeli kwasekuzalweni kwalo, elibumbe isazisi saseKhanada.
1 Abantu Bomthonyama baseKhanada
2 Imiphefumlo emibini yaseKhanada: iBritane neFrentshi
3 Ukufudukela kwelinye ilizwe kunye neyantlukwano kwinkcubeko
4 Ukudumisa kunye nokugxeka
5 Ukwahluka kwenkcubeko eCanada ngamanani
Abantu Bomthonyama baseKhanada
Los abemi bomthonyama baseKhanada, ezaziwa njenge "ntlanga zokuqala" zenziwe ngamaqela angama-600 athetha iilwimi ezimalunga nama-60. Umthetho woMgaqo-siseko wowe-1982 ubeka aba bantu kumaqela amathathu amakhulu: AmaIndiya, ama-Inuit kunye neMetis.
Abantu bomthonyama baseCanada ("iZizwe zokuQala") namhlanje benza malunga neepesenti ezintlanu zabemi beli lizwe.
Kuqikelelwa ukuba abahlali bemveli bamalunga ne-1.500.000 yabantu, oko kukuthi, malunga neepesenti ezi-5 zelizwe liphela. Ngaphezu kwesiqingatha sabo bahlala kwimimandla eyahlukeneyo yasemaphandleni okanye yoovimba.
Imiphefumlo emibini yaseKhanada: iBritane neFrentshi
Sele inkulungwane yeshumi elinesixhenxe imimandla ngoku eyinxalenye yeKhanada yahlolwa yaza yathinjwa iBritane neFrentshi, ukuba iindawo zabo eziphinda zisebenze zinefuthe. Ubukho baseYurophu kula mazwe bonyuke ngenkulungwane ye-XNUMX ngokusebenzisa amaza amakhulu afudukayo.
Emva kokufumana inkululeko ngo-1867, oorhulumente bokuqala baseCanada bavelisa umgaqo-nkqubo onobutshaba kubantu bomthonyama ekuthe kamva kwachazwa njenge "I-Ethnocide." Ngenxa yoko, ubunzima babahlali kwezi dolophu bancitshiswa kakhulu.
EQuebec (eCanada ethetha isiFrentshi) kukho uvakalelo olunamandla lwesizwe
Phantse kwisiqingatha senkulungwane esadlulayo uninzi lwabemi baseCanada babekwelinye lamaqela aphambili aseYurophu: isiFrentshi (ngokwejografi egxile kwiphondo lase Québec) kunye neBritane. Iziseko zenkcubeko yelizwe zisekwe kwezi zizwe zibini.
Malunga ne-60% yabantu baseCanada banesiNgesi njengolwimi lwabo lweenkobe, ngelixa isiFrentshi singama-25%.
Ukufudukela kwelinye ilizwe kunye neyantlukwano kwinkcubeko
Ukuqala ngeye-60s, imithetho yokufudukela kwelinye ilizwe kunye nezithintelo ezazithanda ukufuduka eYurophu naseMelika zatshintshwa. Oku kubangele umkhukula wabaphambukeli abavela eAfrika, eAsia nakwimimandla yeCaribbean.
Izinga lokufudukela eCanada ngoku lelinye lawona aphezulu ehlabathini. Oku kuchazwa yimpilo entle yoqoqosho lwayo (esebenza njengebango labantu abavela kumazwe ahluphekayo) kunye nomgaqo-nkqubo wokudibanisa usapho. Kwelinye icala, iCanada yenye yezona ndawo zisentshona zibamba uninzi lweembacu.
Kubalo luka-2016, ukuya kuthi ga kuma-34 eentlanga ezahlukileyo ezivela kwilizwe. Kubo, elinesibini lidlula kwisigidi sabantu. Ukwahluka kwenkcubeko eCanada yeyona nto inkulu kwiplanethi yonke.
Ubume baseCanada njengelizwe elinenkcubeko eyahlukeneyo babekwa ngo-1998 Umthetho waseCanada weNkcubeko yeNkcubeko. Lo mthetho unyanzelisa urhulumente waseCanada ukuba aqinisekise ukuba bonke abemi baphathwa ngokulinganayo ngurhulumente, ekufuneka ahloniphe kwaye abhiyozele iyantlukwano. Phakathi kwezinye izinto, lo mthetho uyawahlonipha amalungelo abantu bemveli kwaye ukhusela ukulingana kunye namalungelo abantu ngaphandle kobuhlanga, ibala, imvelaphi, ubuzwe okanye imvelaphi yobuhlanga, inkolelo okanye inkolo.
Rhoqo nge-27 kaJuni, ilizwe libhiyozela Usuku lweNkcubeko yeNkcubeko.
Ukudumisa kunye nokugxeka
Ukwahluka ngokwenkcubeko eCanada namhlanje luphawu lokuchongwa kweli lizwe. Iyaqwalaselwa umzekelo obalaseleyo woluntu olwahlukeneyo, olunyamezelanayo noluntu oluvulekileyo. Ukwamkelwa kunye nokudityaniswa kwabo beze kweli lizwe bevela phantse kuzo zonke iindawo zehlabathi yimpumelelo ethandwa kakhulu ngaphandle kwemida yayo.
Nangona kunjalo, ukuzibophelela ekuzimiseleni koorhulumente baseCanada ngokulandelelana kwiinkcubeko ezininzi ikwangumbandela wobunzima kuhlolwa. Ezona zinoburhalarhume zivela ngokuchanekileyo kwamanye amacandelo oluntu lwaseCanada uqobo, ngakumbi kwingingqi yaseQuebec.
Imizobo yenkcubeko yaseKhanada
Abagxeki bathi inkcubeko eyahlukeneyo ikhuthaza ukwenziwa kwee-geutos kwaye ikhuthaza amalungu eentlanga ezahlukeneyo ukuba ajonge ngaphakathi kwaye agxininise iyantlukwano phakathi kwamaqela kunokugxininisa kumalungelo abo ekwabelwana ngawo okanye izazisi njengabemi baseCanada.
Ukwahluka kwenkcubeko eCanada ngamanani
Iinkcukacha-manani ezipapashwa rhoqo ngurhulumente waseCanada zibonakalisa iyantlukwano kwinkcubeko yelizwe. Nazi ezinye zezona zibalulekileyo:
Abemi baseCanada (i-38 yezigidi kwi-2021) ngokobuhlanga:
Abemi baseMelika 4,9%
Abantu baseAfrika 3,1%
Abantu baseLatin America 1,3%
Iilwimi ezithethwa eCanada:
IsiNgesi i-56% (ulwimi olusemthethweni)
IsiFrentshi 22% (ulwimi olusemthethweni)
UbuKrestu 67,2% (ngaphezulu kwesiqingatha samaKhanada angamaKrestu kwaye amahlanu kwisiProtestanti)
Malunga nama-24% abantu baseKhanada bazichaza njengabakholelwa kubukho bukaThixo okanye babanga ukuba abalandeli benkolo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukwahluka ngokwenkcubeko eCanada
I-cumbia, isingqisho sendabuko saseColombia